के छ त्यस्तो रहस्य! युवतीहरुले खोज्न थाले लजालु पुरुषको शुक्रकिट – PathivaraOnline
Home > गसिप > के छ त्यस्तो रहस्य! युवतीहरुले खोज्न थाले लजालु पुरुषको शुक्रकिट
admin October 4, 2019 गसिप, जीवनशैली, विचार	0
शोधकता प्रोफेसर स्टिफेन व्हाइटका अनुसार स्पर्म ब्यांकमा शुक्रकिट दान गर्नका लागि आउने पुरुषहरु मध्ये लजालु पुरुषहरुको माग सबैभन्दा बढि छ । यो अध्ययन २३ देखि ६६ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरुमा गरिएको थियो । अनलाइन सर्भेका क्रममा समाजको मतलब नराख्ने तथा स्वार्थी र रिसाहा पुरुषहरुको शुक्रकिट लिन महिलाहरुले ठाडै अस्विकार गर्ने गरेको पाइयो । अध्ययनका क्रममा अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत, इटाली, स्विडेन तथा अमेरिकाका महिलाहरुलाई सहभागी गराइएको थियो । एजेन्सीको सहयोगमा
सभामुख प्रकरणमा गल्तीको सजाय उपसभामुखलाई !
संगीतकार सरोज प्याकुरेलले जिते सगरमाथा म्यूजिक अवार्ड
आज काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर तापक्रम वृद्धि हुने – घर बाहिर निस्कदा सचेत रहनुहाेला
अलविदा !! केहि दिन अगाडि आमा गुमाएका चर्चित बलिउड नायक इरफान अब रहेनन्